Tenga Pure BHB Keto Drops Appetite Suppressant Weight Loss Products | WoopShop®
Chinhu Rudzi: BHB Keto Drops
Zvisungo: Ketone, L- Carnitine, L- Arginine hydrochloride, Mango, Raspberry, Green tea, Ginger, Dandelion, Garcinia cambogia, Ginseng Demineralized Water, Potassium Sorbate, Citric Acid, Natural Flavour.
Kuwanda: 1 bhodhoro
Muenzaniso Nhamba: 562314
Pure Keto BHB Drops: Wana iyo inonyanya kushanda Keto Supplement ne 20000 mg yeBHB yakachena! Minch keto madonhwe ekudya akagadzirwa zvakanyanya kuti akubatsire kuramba uri muketosis kunyangwe iwe uchidya chikafu chisina hutano uye kupa huremu huremu rutsigiro. Yedu yemvura formula ine yakakwira bioavailability ichakubatsira iwe kuwana nekukurumidza mhedzisiro uye kusvika kune huremu hwaunoda nekukurumidza. Iva neruzivo rwakanyanya hutano nzira yekuve wakagwinya kupfuura nakare kose!
Hutano Huremu Kurasikirwa: Kudya kwakaderera kwecarb kwakaoma, asi kunokupa iwe unoshamisa hutano hunobatsira sekuderedza kudya, kuvandudzwa kwehutano hwemoyo nekuda kwe "yakaipa" kuderedzwa kwecholesterol, uye kuonda, kunyanya mudumbu. Kudya kwedu kunodonha neExogenous Ketones kunobatsira kudzivirira kuparara kweketo uye kuwedzera hutano hwese kuitira kuti unakirwe nekudya kwe keto. Iyo inowedzerawo metabolism uye inonyatso kudzvanya zvishuwo zvekudya zvisina kudya.
Keto Diet Support: Ketogenic kudya uye yekutanga kushayikwa kwecarbs kunogona kukonzera zviratidzo zvakadai sehutsi hwehuropi uye kuneta. Minch keto madonhwe ekudya anobatsira kugadzirisa kukosha kwakakosha kweBHB (iyo yakawanda yakawanda ketone muviri wakagadzirwa nechiropa), iyo inoshanda sehuni yehuropi, moyo, uye tsandanyama munguva apo macarbohydrates ari kushomeka. Inobatsira kutsigira uremu huremu, uye basa rekuziva, kuderedza kuneta uye kuwedzera manzwiro.
Ultimate Quality: Minch keto diet madonhwe ane 100% yakachengeteka kushandisa - haina shuga (kunze kwekunaka kwechisikigo muLime neLemon), starch, gorosi, gluten, mbiriso, kana soy zvinobva. Iyo zvakare haina GMO-isina uye Hutsinye-isina.
Yakanakisa Mhedzisiro Yakavimbiswa: Yedu yepamusoro fomula yakagadzirirwa kuita kuti vatengi vedu vave neutano uye vakasimba nenzira yechisikigo! Isu tine chokwadi chekuti uchanakidzwa chaizvo nemaitiro ako emazuva ese matsva neMinch keto madonhwe ekudya.
Kubva paongororo dze 51
Nguva yakareba yekutumira . Kana kutumira nekukurumidza zvirinani pakudonhedza kutumira. Handizivi kuti zvinoshanda here nekuti ini ndatoonda. Haha
Huya zvandakumbira. Ndichatanga mushonga weaver kana ukashanda.